घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू ल्यूक श बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको बायाँ पछाडि प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम उपनाम हो। 'छ लाख डलर डलर'। हाम्रो लूका शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु लाई पूर्ण खाता प्रदान गर्दछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन र उनको बारेमा अन्य बन्द-पिच साना ज्ञात तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनको गति र घातक बायाँ खुट्टाको बारेमा चिन्ता छ तर केहीले हाम्रो लूका शवको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
ल्यूक पल होयर शो थिम, यूनाइटेड किंगडम मा किंग्स्टन मा जुलाई 12 को 1995th दिन मा पैदा भएको थियो।
उसले आफ्नो जन्मदिनको साथ साझा गर्दछ जेम्स Rodriguez, ब्रेक लेस्नार, मलाला यूसुफज्यू (नोबल शांति पुरस्कार विजेता), सुन्दर पिचई (Google को सीईओ), र बिल कॉस्बी।
लूका उनको आमा, योना शान र बुबा, पॉल शूको जन्म भएको थियो। सर्रीमा बढ्दै गयो, उनले हर्सममा राइड्स एंटरप्राइज स्कूलमा भाग लिइन्।
चेल्सी एफसीको लागि उनको माया Gianfranco Zola फुटबल को लागि उनको जुनून को नजरअंदाज गर्यो। लिटिल ल्यूक एक चेल्सी समर्थक को रूप मा वृद्धि भयो र दावा गरे कि उनको मूल लंदन क्लब को लागि खेलना चाहता थियो। वास्तवमा तिनले आफ्नो अकादमीमा आठ वर्ष पुरानो रूपमा प्रयास गरे। गिल्डफोर्डमा चेल्सीको विकास केन्द्रमा खेलेका खेलाडीले अकादमीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेनन्।
निराशाको बावजूद, लूका अझै फुटबलमा धेरै उत्सुक थियो। उनले प्रारम्भिक उमेरमा आफ्नो सपना पालन गरे। 2001 मा, उनले हर्सहेममा सहभागी गरे पछि पछि उनलाई फुटबल अकादमीहरूको लागि आफुलाई निर्माण गर्न बोली मासोनी जूनियर्स लाई उल्लेख गरिएको थियो। 2003 मा, साउथाम्टनले उनलाई कल दिए। 11 वर्षको लागि क्लबको प्लेलिङ पछि (अकादमीका लागि 2003- 2011), ल्यूकले एनएनएनएक्सएमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्लबलाई खरिद गरेको सबैभन्दा महोत्सवको रूपमा म्यानुअल म्यानचेस्टर युनाइटेडमा सहभागी भयो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
लेखनको समयमा, लूका अविवाहित छ तर उनको प्रेमिका प्रेमिका Shelby Billingham संग सम्बन्ध प्राप्त हुन्छ। जोडे एक-अर्कासँग धेरै खुसी हुनुहुन्छ र उनीहरूको सम्बन्धमा खुसीसाथ आनन्द उठाउँछन्।
ल्यूक श र गर्मिफ्रेंड, शेबी बिलिंघम
लूका र Shelby दुवै दुवै तरिका लन्डन देखि मचेस्टर ले जाने को रूप मा तरिका मा विभाजित। यो बेलामा प्रेमिका एन्साका सान्टोससँग सम्बन्ध सुरु भयो। प्रेमले बलियो बनाउन बलियो हुन्छ।
हालै, बायाँ-ब्याक केही ढिलाइ गरिरहेको थियो क्रिसमस आफ्नो साझेदारसँग खरीदारी। शर, ऊनीले टोपीको साथ लुगा लगाएर आफुलाई सर्दिसको मौसमबाट ढाकेको। ठूलो दिन अघि उपहारका लागि गहना पसल हेर्नको लागी दुवै इच्छुक हुनुहुन्छ।
लूका शॉ आफ्नो प्रेमिका, अनौसाका सान्टोससँग गहना खरीदारीको लागि जान्छ।
तर उनीहरूले गहना पसलहरूको सगाई को छल्ले सेक्शन को स्वाद लगाउने क्रममा निर्णय गर्दा, उनि पनि नराम्रो भविष्यमा आफ्नै विशेष दिन योजना बनाउन सक्थे। तल लूका शव र उनको प्रेमिका अषाका सैंटोस संयुक्त4यूनिसेफ डिनर घटनामा छ।
लूका शव र उनको प्रेमी, अन्सेका सैंटोस
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
लूका जन्मे र थाम्स युनाइटेड किंग्डममा किंग्स्टनको एक प्रसिद्ध ज्ञात एक समयको बीचमा ल्याइएको थियो। यो फुटबल लगानीले आफ्नो पहिलो पुत्रको लागि भुक्तान गर्नु अघि थियो।
उहाँ आफ्ना आमाबाबुको मनपर्ने छोरा हुनुहुन्छ र यसैले उहाँले आफ्नो प्रिय परिवारबाट ठूलो प्रेम र ध्यान पाउनुभयो। यसबाहेक, उहाँले आफ्नो परिवारको सफलताको लागि पनि श्रेय दिनुहुन्छ। तल पॉल शaw, उनको प्रिय पत्नी जोना श (ब्याक हेराई) र उनीहरूका छोराछोरीले लूका शाउ समावेश गर्दछ।
ल्यूक श परिवार
लूकाको बुबा र आमा आदर्श आमाबाबु हो जुन हरेक अवस्थामा सधैं उहाँसँग रहन्छ।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लूका श भाइ भाइ Mourinho
लुक शिव को भाइ एक पल्ट एक चौंकाने वाला चट्टान मा जाने को अस्वीकार गरे जसमा उनले दुर्व्यवहार गरे Jose Mourinho.
स्पिन वनले आफ्नो भाइलाई टोलीबाट आउट गरे पछि बेन शाउ लगाइएको थियो र उनको टोलीले4-0लाई चेल्सी सम्म हरायो।
उहाँले दुर्व्यवहार सुरु गर्नु अघि Jose Mourinho, बेन सुरुमा क्लबलाई राम्ररी मन पराउँछन् र यसो भन्छ: "आज शुभकामना Utd।"
तथापि, चीजहरू द्रुत रूपमा खडा भए जस्तै टीम घोषणा गरिएको थियो र शॉ छोडियो, बेनले कथित रूपमा सोशल मिडियामा निम्न लेखे।
जोनी Mourinho संग बेनी को निराशा
लूका शवले सधैँ आफैले प्राप्त गर्ने क्रममा पाएको थियो Jose Mourinho विस्फोट गर्ने उनको नेतृत्वले उनको टोलीलाई पराजित गर्यो। जोस प्राय: सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिएको थियो कि हरिको वरिष्ठ खेलाडीले जवान रक्षकलाई सान्त्वना दिएका थिए।
ल्यूक शूको साथ जोसेस मोरेन्टोको निराशा
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पैदल ब्रेक भिडियो
ल्यूक शिमले पीएसवी विरुद्ध एक च्याम्पियंस लीगमा खेलमा अचम्मलाग्दो पीडाको डरलाग्दो डबल टर्न ब्रेकको सामना गर्यो।
म्याचमा 15 मिनेट भन्दा कम भए, बायाँ ब्याक ब्याक-अप विपक्षी दण्ड क्षेत्रमा चार्ज गरिएको थियो जब हेक्टर मोरेनो, पीएसवी अभियुक्तले आफूलाई बेवास्ता गरे।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
डैनी गुलाब क्यान्सर हो र यसको व्यक्तित्वको निम्न विशेषता हो।
लूका शक्तिका शक्तिहरू: Tenacious, अत्यधिक कल्पनाशील, वफादार, भावनात्मक, सहानुभूति र उत्साहजनक।
लूका शेकका कमजोरीहरू: मूडी, निराशावादी, संदिग्ध, हेरफेर र असुरक्षित।
के लूका शवलाई मनपर्छ: कला, गृह-आधारित शौकहरू, नजिकको वा पानीमा आराम, प्रियजनहरूलाई साथीहरूसँग साथीहरूसँग राम्रो खाना बनाउन मदत गर्छन्।
के लूका शत्रुलाई मन नपर्ने: अजनबारी, आमाको कुनै पनि आलोचना र व्यक्तिगत जीवनको खुलासा।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उपनाम पछिको कारण
सूर्य एकपटक रिपोर्ट गरेअनुसार उनीहरूले संयुक्त खेलाडीले लूका शाउलाई उपनाम दिएका थिए 'छ लाख मिलियन डलर ". यो उनको कारण यात्रीहरु लाई दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अंतरिक्ष यात्री स्टीव अस्टिन संग समान विश्वास भएको छ।
ल्यूसीले पीएसवी आइन्डेनभन विरुद्ध चैंपियन्स लीगको हारको दौडान डराएर टाउको ब्रेकको सामना गरे।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -आक्रमण गरिएको तथ्य
ल्यूक शाइसले पहिले म्यानचेस्टर युनाइटेड ब्याक ब्याकमा तुलना गरेका छन् पितिस ईरारा मुख्यतः आधारमा आधारित भएकोले कसले खेलको सबै भन्दा ठूलो आक्रमण गरेको छ। हां, ईरारा एक हमलाबारी विंगाब के रूप में एक प्रतिष्ठा कमाई लेकिन आँकड़े शॉ बेहतर है सुझाव देते हैं।
तथ्याङ्कले लूका शवलाई इराराभन्दा बढी आक्रमण-मनपर्छ भनी बतायो
तथ्याङ्क अनुसार, जवानले 141 बनायो 35 प्रिमियर लीग उपस्थितहरु मा आफ्नो टोलीहरु को पार - इवारा प्रबंधित देखि अधिक - र गेंद संग dribble को प्रयास गर्दा एक 56% सफलता दर थियो।
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पॉल Scholes खुशी छैन
एक व्यक्ति शाप अझै पनि प्रभावित छैन अझै सम्म पावल Scholes। पौराणिक मैनचेस्टर युनाइटेड मिडफिल्डर लगातार छ हिँड्नु मूल्य ट्याग मा आफ्नो पूर्व क्लब डिफेंडर को लागि भुक्तानी गरे र दावा गरे कि रेड डेविल्स को बजाय एक स्ट्राइकर मा हस्ताक्षर गरे हुनु पर्छ। एक चमकदार 718-वर्ष-कैरियरमा संयुक्त राष्ट्रको लागि 20 कुल उपस्थितिहरू बनाएका शोलुहरू, हालको रूपमा उद्धृत गरिएको छ भने शताब्दीमा £ xNUMX + मिलियन बाहिर निस्किएको थियो "बेवकूफ"।
ल्यूक शल को पॉल Scholes को अनुमोदन
उनको शब्दहरुमा ..."बायाँ-ब्याकको लागि पाउन्ड 34 मिलियनको लायक हुनका लागि खेल कसरी चलेको छ भन्ने मूर्खता देखाउँछ। त्यसको लागि पैसा, म एक केन्द्र अग्रिम चाहन्छु जुन 30 लक्ष्यहरू एक सिजनमा जाँदैछ "
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको सबैभन्दा खराब प्रतिद्वंद्वी
लूका शान केही डरलाग्दो विरोधीहरूको विरुद्धमा आएको छ। मनपर्छ ईडन हजर्ड, डैनियल स्ट्रिज र विल्फेड जाहा, Luis Suarez सबै वर्ग माथि।
तर उनको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रतिद्वंद्वी को हो? नहीं, Suarez नहीं, विरोध विरोधी बचाव को लागि जानिन्छ। यो हो विक्टर मोशा। भर्खरै सोध्नुभयो ट्विटर क्यू ए ए जसले उनको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रतिद्वंद्वी थियो, स्टारटले जवाफ दिए, सम्भवत:
"यो एक कठिन छ तर म लागि जाँदैछु विक्टर मोशा, शुद्धता उनको गति र शक्तिको लागि। मैले सधैँ यो एकदमै गाह्रो परीक्षण पाएको छु। "
ल्यूक शॉ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -किशोर आशाहरू
विश्वको चौथो-सबैभन्दा सबैभन्दा महंगा सबैभन्दा बढी डिफेंडरको बावजुद, लगभग £ 100,000-a-week को वेजमा खिच्ने, खेलाडी र प्रशंसकहरू समानसँग लचिलो शानलाई फ्लैश कार चलाउन हेर्न चाहँदैनन्।
त्यो होइन किनभने उहाँले एक बर्दाश्त गर्न सक्नुहुन्न - संयुक्त राष्ट्रले तिनको कमाईले संसारको सबै भन्दा ईर्ष्या किशोर किशोरहरू बनाउनु भयो।
पछाडि, यो किनभने किनभने तिनले आफ्नो ड्राइभिङ परीक्षण पारित गरेका छैनन्। यो क्षणहरू तपाईं यो सम्झना मात्र छ कि कति समयमा शव यो थियो।
उनी युएनमा सामेल हुँदा मात्र 18 थिए। उसले सामेल गर्नु अघि, उहाँ अझै आफ्ना आमाबाबुसित जिउँनुहुन्थ्यो। तिनका आमाबाबुले अक्सर तिनलाई तालिम दिन र म्याच खेल्छन्। यो 2014 विश्व कप को लागी यो पनि थियो। शून्यले एक हप्ता लामो, गहन ड्राइभिंग कोर्स लिनुभयो जब उनको XNumX विश्व कप प्रतिबद्धता समाप्त भयो। यो अन्ततः आफ्नो इजाजत पत्र प्राप्त गर्न प्रयासमा थियो। एक ठूलो समृद्ध किशोरावस्थाको वयस्कबाट उनको संक्रमण वास्तवमा केहि र थियो।
डैनी गुलाबको बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।